Khariidadaha Google ayaa lagu cusbooneysiiyay qaabka wadista iyo in ka badan | Androidsis
Khariidadaha Google ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 9.19 oo leh wadista wadista, digniinta maqalka iyo waxyaabo kale oo badan
Waxaan ahayn sugaya cusboonaysiin wanaagsan Khariidadaha. Mid ka mid ah barnaamijyadaas oo xoog badan siiyay nidaamka hawlgalka Android isla markaana u oggolaaday Google inay ku kalifto isticmaaleyaasha kale ee OS kale aaladaha moobiilka, sidii ay ahayd xilligaa macruufka. Codsi aan ku dhaleeceynay waqti uun inuu ilaaway khariidadahaas qadka ama qad la'aanta, oo u oggolaaday barnaamijyada kale, sida Khariidadaha HALKAN, inay soo jiitaan tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo raadinaya khariidado qadla'aan oo tayo sare leh. Sidaa darteed, xilligaas taas oo aysan ku heli karin xogta sabab kasta ha noqotee, waxay sii wadi karaan daalacashada iyaga oo aan lahayn dhibaatooyin waaweyn.
Hadda Google waxay soo saartay nooca 9.19 ee Khariidadaha loogu talagalay Android-ka oo ay ku keeneyso taxane wanaagsan oo war iyo hagaajin ah oo ay ku jiraan habka wadista iyo digniinta codka oo ka mid ah astaamo kale oo badan. Astaamaha kale ee cusub waxay kujiraan shaashadda goobaha cusub ee jadwalka oo kuu ogolaanaya inaad awood badan ku yeelato xudduudahan aan dooneyno inaan hagaajino iyo waxa ikhtiyaar u noqon kara in la kiciyo codka, oo ku yaalo qaabka hagista, taas oo fududeyn doonta joojinta ogeysiisyadan isweydaarsiga cod jeedin ah. Marka la soo koobo, cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aan ku haysan karno qalabka moobiilka sida midka ka hooseeya Android.
1 Cusboonaysiin weyn
2 Ku shaqeysiinta codka hagida
3 Dejinta "waqtigaaga"
Waxaan seegnay cusbooneysi sidan oo kale ah oo noo keenaya warar aad u taabasho badan marka qofku isticmaalo barnaamijkan weyn ee khadka tooska ah iyo kan khadka. Waan istaagi karnaa qaabka wadista cusub Taasi waxay adeegsaneysaa aqoonta ay Google ka haysato dabeecadahaaga iyo waxa taariikhda raadinta ay tahay in la saadaaliyo halka aad u socoto markaad gaari la wado, si aad u siiso xitaa macluumaad faa'iido leh.
Marka taas marinka khariidadaha Google wuxuu qaadanayaa heer kale oo waxay siisaa macluumaad sax ah si uusan isticmaaluhu waqti ugu lumin meelaynta tilmaamaha qaarkood oo uu xoogga saaro ugu horreyn wadista.
Qaabka wadista cusub waxay badanaa u heellan tahay inay kula socodsiiso inta lagugu jiheeyo halkaad u socoto. Qaabkani waa nooc cusub oo ah habka hagitaanka oo adeegsada taariikhda goobta iyo raadinta webka si loogu sameeyo sheegashooyin ku saabsan halka aad ku waddo si aad u bixiso cusboonaysiinta taraafikada iyo goos gooska iman kara. Wax aan ku hayno barnaamijka Google ee u gaarka ah ee Waze.
Qaabkan cusub waxaa laga bilaabi karaa dariiqa tooska ah ee shaashadda weyn ama dhinaca marinka. Kuwa doonaya inay ka adeegsadaan cusbooneysiintan, waa inaad u dhaqaaji gacanta laga soo bilaabo Settings> Dejinta goobaha> Ku dar dariiq wadista wadista. Waxaan kuu sheegayaa inaad dhaqaajiso toobiyedan ​​waa inaad aadaa dhammaan menusyada, xiro arjiga oo xitaa dib u bilow qalabka si aad u muuqato. Marka ay firfircoonaato waxaad awoodi doontaa inaad aragto ikhtiyaarka qaabka wadista cusub ee firfircoon. Tani waxay u sabab tahay cillad si dhakhso leh loo xallin doono.
Ku shaqeysiinta codka hagida
Mid ka mid ah horumarada ugu muhiimsan ee sida dhow ugu xiran qaabka wadista cusub ayaa ah badhanka codka si aad ugu kala bedesho saddexda ikhtiyaar Tan ugu muhiimsan: aamusnaan, digniinta kaliya, iyo firfircoon. Ogeysiisyada waxaa lagu soo bandhigayaa oo kaliya halka loo socdo iyadoo la aamusanyahay hantiduna waxay ka muuqaneysaa labadaba hagida iyo qaabka wadista cusub. Kala beddelashada hababka maqalka ee kala duwan ayaa qaadan doonta xoogaa qasabado ah, laakiin xaqiiqdii waa ka dareen badan tahay sidii hore.
Sidan oo kale waxaan lahaan doonnaa xakameyn dhab ah codka, maadaama waqtiyada qaarkood ay noqon karto wax yar oo laga xumaado.
Waxaan horey u ogaanay sida Google wuxuu ku daray waqtiga jadwalka Khariidadaha si aan u ogaano taariikhda goobaha aan uga baxeyno tallaabadayada. Cusboonaysiintaan waxaa lagu xoojiyay dhowr waxyaalood maaddaama ay tahay shaashad dejineed oo leh habab cusub oo lagu xakameeyo waxa aan dooneyno inaan aragno iyo nooca xogta la soo ururinayo.
Markaad fureyso aragtida waqtiga oo aad gujineyso menu-ka hoos-hoosaadka ah, ikhtiyaarka "Maareeynta goobaha" waxaa lagu beddelay "habeyn taariikhi ah taariikhda". Shaashadan cusubi waxay soo bandhigaysaa habab lagu xaddido isticmaalka xogtaada oo ku dar xulashooyinka qaarkood si aad u go'aamiso haddii aad rabto in sawirradu ka muuqdaan Sawirada Google ama haddii hawsha ama abka raadinta ay tahay inay door muhiim ah ka qaataan sixitaanka goobaha.
Soo Degso Qariiradaha APK
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Khariidadaha Google ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 9.19 oo leh wadista wadista, digniinta maqalka iyo waxyaabo kale oo badan
Suaal. Waxaan hayaa nooca 9.21.0 oo shaqadaas iima muuqato.
Ma ka ogtahay wax ku saabsan sida loo kiciyo? Mahadsanid!
Google wuxuu u abuuri lahaa qeyb kala ah Xaqiiqda Virtual
Elephone W2, Elephone saacadeeda laakiin aan lahayn Android Wear